Fanondranana an-tsokosoko | 102 KARA
Vao tsy ela akory izay ny tompon’andraikitra voalohany ao amin’ny Minisiteran’ny harena an-kibon’ny tany no nilaza fa MAHAMENATRA raha toa ka efa tonga any ivelany ny harenantsika, ary indrindra izao farany izao fa ny volamena vao mibaribary toy ny kary an’efitra fa NAONDRANA an-tsokosoko izy ireny.
Dia mazava ho azy arak’izany fa nisy tsikombakomba nanao maso tsy mahita, ny fivoahan’izany volamena izany an-tsokosoko : na ny polisy na ny sampan-draharahan’ny fadin-tseranana eny amin’ny seranam-piaramanidintsika eny.
Koa tsy maintsy atao maty paika ny fepetra rehetra mikasika ny famoahana ireny harena ireny, ka tafiditra ao anatin’izany ny volamena, mba HO ARA-DALANA. Manainga ihany koa ireo mpandraharaha mba hizotra amin’ny làlana marina sy tena izy, ka tsy ho tratry ny fanangolena ary ho tafalatsaka ao anatin’ny HONAHONAN’NY risoriso, ny halatra ary ny fandrobam-pirenena, hoy ihany ny Minisitry ny harena an-kibon’ny tany.
Antso avo ihany izany fa asa aloha raha ho tonga any an-tsofin’ny mpanao « trafika », satria misy fiteny malagasy milaza ny hoe : » Sarotra ho an’ny tànana efa zatra mivokona no andeha hitsotra «
5 juillet 2013 - 2 h 39 min Economie 1525 vues